स्वास्थ्यसेवी र समाजसेवीको रुपमा निरन्तर खटिदै आएको छु - भिक्षु वाङ्चुक राप्तेन लामा – newslinesnepal
स्वास्थ्यसेवी र समाजसेवीको रुपमा निरन्तर खटिदै आएको छु – भिक्षु वाङ्चुक राप्तेन लामा
प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७७, शनिबार ०९:१९
वाङ्चुक राप्तेन लामा एक भिक्षु हुन । बौद्धमार्गी भिक्षुको आङमा गेरु वस्त्र टुटने सवाल नै रहेन । त्यसैले जो कोहीले उनलाई साधारण भिक्षुको रुपमा मात्र लिने गर्छन् । गेरु वस्त्र भित्र लुकेको उनको जीवनको अर्को पाटो बारे कतिपयले लख नै काटन सक्दैनन् । आखिर उनको कर्मशील जीवन स्वास्थ्य सेवामा समर्पित रहेको छ भन्ने बारे धेरै मानिसहरु अनविज्ञ छन् । वास्तवमा उनी एच ए अर्थात हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् । जसले काभ्रे नमोबुद्ध स्थित गुम्बाको स्वास्थ्य क्लिनिकको प्रमुखका रुपमा काम गरेका छन् । सेवा दिए बापत आफुले कुनै प्रकारको पारिश्रमिक लिने नगरेको उनी बताउँछन् । पाँच रुपैयामा नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अभियानमा उनी जुटेका छन् । उनको निस्वार्थ भावनाको कदर गर्दै बिल गेट्स फाउण्डेशन लगायतका अन्तर्रािष्ट्रय स्तरका संघ संस्थाहरुले समेत सम्मान गरेका छन् । वाङ्चुक राप्तेनसँग न्युज लाइन्स् पाक्षिकले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप)
हाल के मा व्यस्त हुनु हुन्छ ?
हाल अलिक खाली खाली नै छु । करिब एक महिना यता काम विहिन जस्तै बनेको छु । अझ भन्नु पर्दा, नियमित काम गर्दै आएको कार्यस्थलबाट टाढा छु । यद्यपी स्वास्थ्यसेवी र समाजसेवीको रुपमा निरन्तर खटिदै आएको छु । अरु त दिनचर्याको कामहरु भए । हाल यस्तै यस्तै काममा व्यस्त छु ।
यहाँले स्वास्थ्यसेवी र समाजसेवीको रुपमा निरन्तर खटिदै आएको छु भन्नु भयो यस बिषयमा प्रस्ट पारिदिनुस न ?
म बौद्ध भिक्षु भएकाले म एच ए हो भन्ने कतिपयलाई विश्वास नै हुदैन । मलाई नजिकबाट देख्ने र चिन्नेलाई मात्र मेरो वास्तविक कर्म बारे थाहा छ । वास्तवमा म एक स्वास्थ्यकर्मी हुँ । नमोबुद्ध गुम्बामा गुरुलाई भनेर आफ्नै पहलमा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरि आम सर्वसाधारणलाई केबल ५ रुपैयामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गर्दै आएको थिए । शुरुमा दर्ता शुल्क ५० रुपैया लिने तर त्यस पश्चात नियमित चेकजाचका लागी ५ रुपैया मात्र लिएर औषधोपचार गर्ने गरिन्थ्यो । जुन हाल पनि कायम नै छ । एक त कम शुल्कमा उपचार पाइने, अर्को तर्फ स्तरिय सेवा उपलब्ध हुने, सायद त्यही भएर होला हाम्रोमा टाढा टाढाबाट पनि उपचारका लागि बिरामीहरु आउने वातावरण बनेको थियो । समाजसेवीको रुपमा चाहि मैले मेरै जन्म गाउँ गोरखाको छेकम्पारमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा सहायता जुटाएको थिए भने २०७२ सालमा आएको भुकम्प, बर्षनी जाने बाढि पहिरो र हाल फैलीरहेको महामारीको समयमा पनि उद्धार र राहत वितरण गर्दै आएको छु । त्यस्तै, प्रत्येक बर्ष मैले मेरै पहलमा ग्रामिण दुर दराजसम्म स्वास्थ्य शिविर पनि संचालन गर्ने गरेको छु । यसरी म स्वास्थ्यकर्र्मीको नाताले स्वास्थ्य सेवाको सुधार र पहुँच विस्तारको लागि लागी पर्दै आएको छु ।
तपाईं भिक्षु बन्नु अगावै स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो वा पछि बन्नु भएको हो ?
म भिक्षुबाटै स्वास्थ्यकर्मी बनेको हुँ । ममा गुम्बामा पूजा पाठ र ध्यान मात्र गर्ने भन्दा पनि अरु केही गर्नु पर्छ भन्ने हुटहुटी पलायो । त्यसैले मैले एच ए बन्ने निधो गरे र मेरा लामा गुरुलाई अध्ययन गर्छु भने पछि उहाँकै सहयोगमा पढने वातावरण पाए ।
भिक्षुको जीवन रोजेको मानिस यसरी स्वास्थ्यकर्मी बनेको खासै पाइदैन, यहाँमा चाहि कसरी उत्प्रेरणा मिल्यो ?
म गोरखाको विकट ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्केको मानिस । हाम्रो त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा पाउनै मुश्किल पथ्र्यो । आफ्नै आँखा अगाडी धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएको देख्नु पथ्र्यो । मैले मेरी आमालाई पनि उसै गरी गुमाउन पुगे । उहाँले पनि अकालमै मृत्युको सामना गर्नु प¥यो । त्यस घटनाले मलाई पोली रह्यो । मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता महशुश गरे । मैले भिक्षुको जीवन व्यथित गर्दै गर्दा पनि मनमा पूर्ण शान्ती महशुश गर्न सकिन । आखिर प्रत्यक्ष रुपमा मानव सेवामा लाग्ने उत्तम विकल्प स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो भन्ने लागेकाले मैले हेल्थ असिसटेन्टको कोर्ष गरे । मलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नका लागि आमा गुमाउनुको पिडा र मेरा लामा गुरुबाट सेवाको रुप बारे प्राप्त दिक्षाले पनि घच्घचाई रहयो । त्यसैले मेरो आमा र गुरुलाई नै मैले मेरो प्रेरणाको स्रोत ठान्छु ।
यहाँले पाँच रूपैयाँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अभियानमा छु भन्नु भएको छ, यो कत्तिको सफल हुने देख्नु हुन्छ ?
पक्कै पनि कुनै पनि काम गर्न सहज हुँदैन नै । अझ अरुसँग सहयोग जुटाएर काम गर्न खोज्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने गर्छ । अर्थात भनौ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम आँफैमा चुनौतीपूर्ण रहन्छ नै । तर समाजमा छाप छोडने गरि काम गर्दै जाने हो भने सबै जनाले विश्वास गर्दा रहेछन । मैले पनि यहि नै अनुभव गरे । जसरी मैले पाँच रुपैयाँ नै उपचार गरेर देखाए । अझ भनौ परामर्श, परिक्षण र औषधी पनि त्यही भित्र उपलब्ध गराउने जुन कार्य गरियो त्यो वास्तवमा नै चुनौतीपूर्ण काम थियो । जसलाई म लगायत गुम्बाका गुरु, अन्य साथीहरु र सहयोगी हातहरुको साथबाट सार्थक बन्यो । हामीले क्लिनिकमा एम बि बिएस डाक्टरको व्यवस्था पनि मिलायौ । विशुद्ध मनले सेवाभाव राख्ने हो भने यहाँ सहयोगी हातहरु आँफै खोज्दै आउँछन् । यदि म मा कुनै लोभ लालसा छैन भने पक्कै पनि राम्रो गर्न सक्छु र त्यसको बारेमा मैले बोल्दै हिडनु पनि पर्दैन । जसरी तपाईंहरु आउनु भाको छ, त्यसरी नै अरु साथीहरु पनि जोडिन आउनु हुन्छ । यसमा दुई मत छैन । र म पनि विश्वस्त छु कि हाम्रो अभियान सफल हुनेछ । हामी स्वास्थ्य सेवा नपुगेका स्थानहरु, दुर दराजसम्म पुग्ने छौ । यस कार्यमा सहयोग गर्ने वाचा केही साथीहरुले गर्नु भएको पनि छ । विदेशी साथीहरुले पनि विशुद्ध सेवाको लागि सहयोग गर्छु भन्नु भएको छ । सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ । अभियानलाई अघि बढाउन हामीलाई फाउण्डेशन नै दर्ता गर्ने साथीहरुले सुझाउनु भएको छ । करिब एक महिना यता गुम्बाको क्लिनिकबाट पनि छुट्ट भएको छु । सम्भवत अभियानको नयाँ काम छिट्टै शुरु गछौं । जुन यहाँले अभियानको सफलताको बिषयमा प्रश्न राख्नु भयो यस बिषयमा चाहि भन्नै पर्दा विगतमा पनि हाम्रो अभियान सफल रहयो भन्ने पाएका छौ भने भोली पनि सफल हुन्छौ भन्ने आशा विश्वास लिएको छु ।
अन्तमा यहाँको भावी योजना के छ ?
हेर्नुस् मानिसहरू सिटमोल खान नपाएर मरिरहेका छन् । दुर दराजसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगि सकेको छैन । सुत्केरी हुन नसकेर अकालमा आमा र शिशुको ज्यान गएका घटना पनि सुन्नुपर्छ हामीले । मध्यम स्तरका मानिसहरुमा पनि स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिनाइ भोग्नु पर्ने अवस्था छ, यहाँ । गरिबीको रेखा मुनी रहेका मानिसहरुको स्थिती निकै नाजुक छ भन्ने भनि रहनु नपर्ला । यस्तो बिषयले म चसक्क हुन्छ । मैले मेरो आमा पनि अभाव कै कारण गुमाएको हुँ । तसर्थ पनि समाजका हरेक वर्गलाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मेरो लक्ष्य रहि आएको छ । साथै मेरो जीवन समाजसेवा गरेरै बिताउने योजनामा छु । वास्तवमै, म उनीहरूकै लागि निरन्तर लगिरहेने प्रण गर्छु, जो अभाव र न्युनतम स्वास्थ्य सेवाबाट पनि बन्चित छन् । यसका लागि फाउण्डेसन दर्ता गरेरै म अघि बढने अन्तिम तयारीमा जुटेको छु । पुनः हाल म के अवगत गराउन चाहन्छु भने मैले गुम्बाको क्लिनिकबाट सधैंको लागि आवकाश लिईसकेको छु । आफ्नै फाउण्डेशन मार्फत नयाँ ढंगले अझ शसक्त ढंगबाट अगाडि बढ्ने अवगत गराउँछु । धन्यवाद हजुर सेवा भाव आजिवन जिवन्त रहोस्, मौका दिनुभएकोमा हजुर लगायत सम्पूर्णमा धन्यवाद ।